Iindaba - Qingdao Zonke Universe Machinery Equipment Co., Ltd yasekwa ngo-2008 ……
Qingdao Zonke Universe Oomatshini Equipment Co., Ltd yasekwa ngo-2008 ……
Qingdao Zonke Universe Machinery Equipment Co., Ltd yasekwa ngo-2008, ibekwe eQingdao nto leyo isixeko izibuko elihle kwiPhondo Shandong. Ukubonelela ngeentlobo ezininzi zezixhobo zokomelela komzimba njenge-trampoline, ukutsala ibha, ukujikeleza ibhayisekile, ukuhambisa amanzi njlnjl.
Sifumana izimvo ezininzi ezilungileyo kubathengi bethu. Inkampani yethu inamava atyebileyo okuyila, ukuvelisa kwizixhobo zomzimba, kwaye yadlula i-ISO 9001 yoQinisekiso lweNkqubo yoLawulo loMgangatho, isiqinisekiso se-CE.
Ngama-25,000 eemitha zesikwere kunye nabasebenzi abangaphezu kwe-150, sihlala sikholelwa ukuba ukunyaniseka bobona butyebi bukhulu. Siqinisekile ukuba sinokubonelela ngale nto uyifunayo ngeenkonzo zethu ezilungileyo. Ukwenza igama lophawu kunye nokuthwala uxanduva loluntu njengemishini yokwenza igalelo kuphuhliso lwezizathu zempilo.
Umgangatho kunye nenkonzo yinkcubeko yethu!
Gcina ukwenza izinto ezintsha kunye nokuphucula!
Ukuba yinkokeli yeshishini!
Siyathemba ukuba siya kuba lukhetho lwakho olufanelekileyo!
Ukujikeleza ibhayisekile, Ukuzivocavoca ngebhayisikile ejikelezayo, Umpu Wokuphulula, Ukuphulula umpu 30 isantya, I-Iron Gym Tsala ibha, Umpu omncinci wokuphulula,